Iingcebiso kunye neKhokelo yokuPhonononga uVavanyo lweBar
Uphumelele ngempumelelo indlela yakho kwisikolo somthetho kwaye ngoku uvavanyo olulodwa lweentsuku ezimbini, ukuhlolwa kwebha, kude nokuba ngummeli.
Icandelo lokuqala leengcebiso: bhiyozela i- JD yakho ngokukhawuleza uze uqhube uvavanyo lwe-bar prep emva kokugqiba. Ixesha likhawuleza. Nazi ezinye iingcebiso ezintlanu zokuncedisa ukudlula ukuhlolwa kwebha.
Bhalisela iBanga lokuHlola iBar
Unokuzibuza ukuba kutheni emva kweminyaka emithathu yezikolo ezibiza kakhulu ngoku ukulindeleke ukuba uhlawule imali eyongezelelweyo ukuze ufunde oko ucinga ukuba kufuneka ufunde ngexesha lesikole somthetho.
Kodwa ngoku akusiyo ixesha lokuba uxhalabele ngeendleko zokuhlolwa kwebar. Yiba njengezoqoqosho njengokuba kunokwenzeka, ngeendlela zonke, kodwa cinga malunga nokuba kuya kuthini kuwe, ngokwezemali, ukusilela i-bar , ubhekane nabaqashi ngaphandle kwelayisenisi yokusebenzisa umyalelo, kwaye kufuneka uhlawule ukuza kuphinda uhlole uvavanyo lwebha. Ukuba unqatshelwe ngenkokhelo ngemali, kukho iimali-mboleko zemvavanyo ezizodwa ezifumanekayo ngqo kule njongo.
Kutheni ubhalisele kwikota yokuphonononga ibha? Ewe, abo bathabatha iikhosi zokuphononongwa kwebar baya kuba neengongoma ezihamba phambili ngenxa yezizathu - abaqeshwa bekhosi bafunda kwaye bahlalutya iimviwo ukuze bazi ukuba ngabaphi abavandlakanyo abanokuvavanya kunye nokuba bafuna ntoni kwiimpendulo; banokukunceda ukuba "zihloko ezifudumeleyo" kwaye ziqeqeshe indlela yokuhambisa iimpendulo ezifanelekileyo, kwaye yile nto ibaluleke kakhulu ngexesha lokuhlolwa kwebha. Ewe, kufuneka ukwazi kwaye uqonde izinto ezisemgangathweni zemimandla esemthethweni yomthetho, kodwa lonke ulwazi lwezomthetho kwihlabathi alinakunceda ukuba awukwazi ukuba ulungele impendulo yakho njengoko abalawuli befuna ukulifunda.
Tshela wonke umntu ongenakukulindela ukukubona ngeenyanga ezimbini
Le nto yinto yokunyanyisa, kodwa kungekhona kakhulu. Musa ukucwangcisa ukwenza nantoni na enye kwiinyanga ezimbini phakathi kokugqweswa kunye nokuhlolwa kwebha ngaphandle kokufunda. Ewe, uza kuba nobusuku kwaye kunye nosuku oluphela apha naphandle, eziyimfuneko yokuphucula ingqondo yakho, kodwa ungacwangcisi umsebenzi, ukucwangcisa iziganeko zentsapho, okanye ezinye izibophelelo ezinzulu kwiinyanga ezimbini ngaphambi kokuhlolwa kwebha.
Ngokukhawuleza, uvavanyo lwebha kufuneka libe ngumsebenzi wakho wesikhathi esigcwele kulezo ziinyanga zokufunda; ukuphakanyiswa kwakho kuya kufika xa ufumana iziphumo owadlulileyo.
Yenza iShedyuli yokuFundisisa kwaye Yibambelele kuyo
Ikhosi yakho yokuphonononga ibha iya kunika ixesha elicetywayo, kwaye ukuba uyakwazi ukuhlala kuyo, uya kwenza kakuhle. Izifundo eziphambili ezivavanywa kwi-bar yokuhlolwa ziya kuba zifundo ezifanayo ezisisiseko owathatha unyaka wokuqala wesikolo somthetho , ngoko qi niseka ukuba unikezele ixesha elide kwiikontrakthi, kwiiTorts, uMthetho woMgaqo-siseko, uMthetho woLwaphulo-mthetho kunye neNkqubo, iNkqubo kunye neNkqubo yoLuntu. . Amazwe ayahluka ngokumalunga nezinye izifundo ezivivinywe, kodwa ngokusayinwa kwikhosi yokuphonononga ibha, uya kuba nekhondo langaphakathi kulabo nabo.
Isicwangciso sesifundo esisisiseko se-bar esicwangcisiweyo singazibekela eceleni iveki ukufundisisa isihloko ngasinye, kubandakanywa nemibuzo yokusebenza. Oku kuya kukushiya iiveki ezimbini ukuzinikela ixesha kwiinkxalabo kunye neendawo ezingenamsebenzi ezinokuthi zingabhekiswa kwi-bar bar yokuhlola.
Enye ingongoma apha ekufundeni: cinga ngokwenza i-flashcards. Kwinkqubo yokubhala, uya kunyanzelwa ukuba ulungelelanise imigaqo yomthetho kwiimboniselo ezimfutshane ukuze ulungele ekhadini, ngokuqinisekileyo njengoko uzakufuna ukubonelela kwiingqinisiso zokuhlolwa kwebha. ubhala.
Thatha uvavanyo lweeBha bar
Inxalenye enkulu yexesha lakho lokulungiselela kufuneka isetyenziswe ekusebenziseni iimviwo zebha bar , kokubili ukhetho oluninzi kunye neengqinisiso, phantsi kweemeko ezinjengeemvavanyo. Awudingi ukuhlala phantsi kwaye uthatha iintsuku ezimbini ezimbini ngeveki ukuba uthathe uvavanyo lwebha bar, kodwa qi niqiniseke ukuba wenza imibuzo ekhethiweyo yokukhetha kunye neengqinisiso ukwenzela ukuba uvakalelwa kakuhle kwisakhiwo sokuhlola. Njengoko xa ulungiselela i-LSAT, ukhululekile ngakumbi ukuba ube novavanyo kunye nefomathi yayo, ngakumbi uya kukwazi ukugxininisa kwizinto kwaye ufumane iimpendulo ezichanileyo.
Qala ukwenza ukuqhuba imibuzo ngokukhawuleza ngeveki yokuqala yokufunda; Hayi, awuyi kukufumana into eyiyo yonke into, kodwa ukuba ubeka ingqalelo into oyiphuthayo, loo migaqo iyakunamathela entloko yakho ngaphezu kokuba uvele uzame ukubamba ngekhanda ngokufunda.
Kwaye, njengebhonasi eyongeziweyo, ukuba le mibuzo ibandakanywe kwizinto zokubhalwa kwebar, nazo ziyakwazi ukufana nezo ziya kuvela kwi-bar yokuhlola.
Ukuba uthe waphumelela kwisiqingatha esiphambili somgangatho wesikolo sakho somthetho, amathuba aphezulu kakhulu ukuba uya kudlula ibha. Ukuba uthe waphumelela kwikota yesibini, ubunzima obuya kudlula busebuhle kakhulu. Ngoba? Ngenxa yokuba uvavanyo lwebha, kungakhathaliseki ukuba liphi ilizwe, vavanya ubuchule bakho ukuba ube ngummeli kwaye akuyikuba ummeli omkhulu uza kuba njani - kwaye oko kuthetha ukuba ufuna kuphela ukufumana u-C oqinileyo kwiimviwo zokupasa. Ukuba uthe wadlula isikolo somthetho, akukho sizathu ongenakukwazi ukudlula ukuhlolwa kwebha kwibhendi yokuqala.
Oku akuthethi ukuba ufanele uphumule kwimpumelelo yakho yesikolo kwaye uthathe ukuba uya kudlula, kunjalo. Usadinga ukubeka ixesha kunye nemizamo ekufundeni nasekusebenziseni izinto, kodwa iimeko ezinokuthi uya kuzidlula. Uninzi lwamazwe anamazinga angaphezulu kwama-50% okupasa. Khumbula ezo manani xa uxinzelelo luqala ukufakwa.
Khawukhumbule nje ukuba yonke iya kuphelelwa kwiiveki nje. Ngesilungiso sokujonga ibha yokunene, awuyi kuphinda uhambe kwakhona.
Indlela yokuFundisisa iSifundo seSikolo soMthetho
Yintoni endifanele ndiyifake kwiSikolo soMthetho?
I-Dos ne-Don'tts for Note Ukuthatha kwi-School School
Inverse Proportion Definition
Toda i-información esencial que debes saber sobre ciudadanía americana